प्रचण्डले भने, हिन्दु धर्म सामन्तहरुको हो, कम्युनिस्टको धर्म क्रिस्चियन हो (भिडियो सहित) - info4nepal
कम्युनिस्टले जस्तै मानवजातीको हित र समानताको लागी लडेकाले त्यसबेलाका सामन्तीले यशु क्रिस्टको हत्या गरेको प्रचण्डले खुलासा गरेका छन्।नेपालको नयाँ संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको धर्मनिरपेक्षताले इसाई धर्मलाई संरक्षण गरेको प्रचण्डको भनाइ थियो । दाहालले थपे ,हरेक धर्मको संरक्षणका लागी संविधानमा स्पस्ट रुपमा धार्मिक सहिष्णुताका लागि कदम चालिएको छ ।
नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । तरपनि यहाँका ८० प्रतिशत बढि मानिसहरु हिन्दुधर्ममा विस्वास गर्छन् ।आफूले चाहेको धर्म मान्न पाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।
तर नेपाली समाज अभाव, अशिक्षा र सबैभन्दा बढि बेरोजगारी समस्याबाट ग्रसित भएर बाँचीरहेको समाजमा पछिल्लो क्रममा इसाईका अनुयायीले अनेक आशा देखाएर धर्म परिवर्तन गरेको घटना बाहिरिएको केहि दिन नबित्दै एक औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले भने,हिन्दु धर्म सामन्तको प्रतिक हो ।त्यसैले कम्युनिस्टको धर्म क्रिश्चियन नै भएको स्पस्ट पारे ।
उनको भाषणको एक अंश हेर्नुहोस र भिडियो भन्दा तलको रोचक कुरा पढ्नुहोस
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष भन्छन रवि महाराजा हो र?
यी आरोपहरु बेतुकको मनाको तुष्टी मात्रै हो । पत्रकार रवी लामीछानेजीले आफैले भन्नु भएको छ,‘म पत्रकार होइन । पत्रकारको प्रेस पास लिनुभन्दा जुत्ता पालिस गर्छु भन्नु भएको छ ।’ त्यसकारण उहाँ पत्रकार होइन । उहाँले पत्रकारिताको परिक्षा पास गर्नु भएको छैन । तर, श्रमजीवि ऐन अन्तर्गत हेर्ने हो भने उहाँले गरिरहेको काम पत्रकारिता पेशा भित्र पर्छ । पत्रकारिता पेशामा रहेको गैर पत्रकार भन्नुपर्ने हुन्छ किन भने सुचना विभागको पत्र अनुसार उहाँले प्रेस पास लिनु भएको छैन । श्रमजीवि पत्रकार ऐन अनुसार न्युज २४ टेलिभिजनले दिएको दरबन्दीमा १९ नम्बरमा त्यही रुपमा परिभाषित गरिएको छ । उहाँले जसरी अरोप लगाउनु भएको छ । त्यो आरोपको के दम र अर्थ छ ?
उहाँले अहिलेसम्म २ सय वटा कार्यक्रमको श्रङ्खला चलाउनु भएको होला । त्यसमध्ये २ वटामा उजुरी पर्यो । उहाँको कार्यक्रम नराम्रो छ वा जनताको भावना विरोधी छ भनेर कहिल्यै भनेका छैनौँ । हामीले हेर्ने भनेको पत्रकार आचार संहिता पालना भयो की भएन भनेर मात्रै हो । उहाँको कार्यक्रम मर्यादित, सन्तुलित, र जिम्मेवार भयो या भएन हेर्ने मात्रै हो । त्यो क्रममा २ वटा उजुरी पर्यो–कैलाश लोहनी र लक्ष्मण विकको ।
उजुरी परेपछि काउन्सिलको काम हो – उजुरी सुन्ने । जसरी अदालतले मुद्दाको सुनुवाई र फैसला गर्छ । प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ । त्यस्तैगरी प्रेस काउन्सिलले पनि मिडिया अनुगमन गर्ने काम गर्छ । गत पौषमा हामीले उहाँलाई सोध्यौँ । उहाँले चैत्र २१ गते जवाफ दिनु भयो,‘म विदेशी होइन ।
श्रमको अनुमति लिएको छु । म प्रेस पास लिन्न बरु जुत्ता पालिस गरेर बस्छु ।’ यी तीनवटा कुरा गर्नु भयो । अर्थात उहाँले नेपालको अध्यागमन, श्रम र प्रेस कानुन गरी ३ वटा कानुन तोड्नु भयो ।
जवाफ दिने तरिका त्यो थिएन । हामीले टेलिभिजनका अध्यक्ष अनिल जोशीलाई पनि बोलायौँ । तर, आउनु भएन । यसको मतलब राज्यको एउटा निकायले सोधेको प्रश्न उहाँहरुकै लागि थियो । उहाँहरु आएर जवाफ दिएको भए पछिसम्मका लागि राम्रो हुन्थ्यो ।
जस्तोकी प्रहरीले कसैलाई केही मुद्दामा बयान लिन बोलायो तर मानेन भने प्रहरीले जबरजस्ति उठाएर ल्याउँछ । पेन्सन पाएको कर्मचारीले पनि मर्यादामा बसेन भने उसको पेन्सन खोसिन सक्छ । प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीकै बारेमा पनि समस्या आइरहेको छ । राज्यको नियममा बसेपछि मान्नुपर्छ नत्र त जंगली समाज भएन र ? अमेरिकाको त्यत्रो विकसित समाजमा सिकेर पढेर आउनु भएको भनिएको रवीजीले यत्ति कुरा पनि ख्याल गर्नु भएन ।
उहाँले पत्रमा लेख्नु भएको छ,‘म प्रेस काउन्सिलले दिने वा सिफारिस गर्ने प्रेस पास लिन्न । उहाँलाई यति सामान्य जानकारी पनि रहेनछ की प्रेस पास बाँढ्ने काम सुचना विभागको हो । नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय विभाग नै हो । सुचना विभागको अभिलेखमा उहाँले प्रेस पास लिनु भएको देखिँदैन तर पत्रकारीता गरिरहेको देखिन्छ ।
उहाँले छल्नु भएको छ । सन् २०१४ को जुन ५ देखि नेपाल आउने गरेको देखिन्छ । तर, दाजु हरिशरण लामिछानेको रिलेशनसिप भिषामा हुनुहुन्छ । त्यो भिषा अन्तर्गत नेपालमा आम्दानी हुने कुनैपनि आंशिक वा फूलटाइम काम गर्न पाइँदैन ।
उहाँले अमेरिकन नागरिकता छोडिसकेको अवस्थामा अर्कै कानुन आकर्षित होला । हामीले हेर्ने भनेको आचार संहिता नै हो । उहाँको नागरिकताको विषयमा गृहमन्त्रालयले बोल्छ । हामी बोल्दैनौँ । उहाँको कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिललाई चार्ज सिट र टार्गेट गरेर बोल्नु भयो ।
साम्प्रदायीक सद्भाव भड्काउने विषयलाई ठाउँ दिनु भएको छ । केही लाईभ फोन कल रिसिभ गर्नु भएको छ । जसमा प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीलाई हान्ने, काट्ने र मार्ने कुरा समेत छन् । त्यो वान्छित हुन्छ की हुँदैन ? मधेस आन्दोलनमा तराईमा ‘धर्ती पुत्रहरु भाला, बर्षा लिएर आउ’ भनिएको थियो । त्यस्तै भयो की भएन ।
आइजिपी नियुक्ती प्रकरणमा कार्यसम्पादन मुल्यांकनको विषय आएको थियो । उच्च अदालत पाटन र प्रहरीले ३ दिन भित्र स्रोतसहित बयान दिन आउनु भनेर ३ वटा अनलाईनलाई पुर्जी काटिएको थियो । हामीले ती साथीहरुलाई पत्रकार भएको र प्रेस काउन्सिलमा सुचिकृत भएका कारण जोगायौँ । रवीको पक्षमा केही मान्छेहरु होलान् ।
स्वभाविक रुपमा उहाँले जनताको आवाज मुखरित गर्नु भएको छ भने उहाँलाई ‘हाई हाई’ गर्ने तप्का पनि छ । तर, अर्को पक्ष पनि हुन्छ । सिक्काको दुई वटा पाटा हुन्छन् । उहाँको कारण पीडित अर्को पक्षले आएर उहाँलाई आक्रमण गर्यो भने पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले बक्तव्य निकाल्ने, सरकारसँग कारबाहीको माग गर्ने अवस्था हुन्छ की वा यो यस्तै फेसबुकमा मनलाग्दी मनको विरह पोख्ने एउटा कार्यक्रम प्रस्तोता हो त्यसकारण सरोकार छैन भनेर हामीले वक्तव्य दिने ।
जसरी प्युठानका पत्रकार सोनु कुमार सुनारलाई कपिलवस्तुको रेडियो स्टेशनबाट ल्याएर सेन्टर जेलमा राखिएको छ । पत्रकार महासंघ र काउन्सिलले उहाँलाई जोगाएको छैन किनकी उहाँले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिप्रति अमर्यादित टिप्पणी गर्नु भयो । पत्रकार भएर पनि हामीले बोल्न सकेनौँ भने रवी जि त गैर पत्रकार हो । गैर पत्रकारमाथि भोली केही भयो भने के होला ? उहाँको टिप्पणी लेखाइ वा अन्य कुनै कारणले नेपालको साइबर कानुन आकर्षित भयो भने उहाँलाई कसले बचाउँछ ।
भिडले आएर बचाउँछ ? भिडले कर्ण हेजुलाई बचायो ? भक्तपुरमा कर्ण हेजुको मरण कसरी भयो ? भोली कुनै भिडले आएर प्रेस काउन्सिल वा सरकारको पदाधिकारीमाथि कुनै आक्रमण भयो भने जिम्मेवारी रविजीले लिनुहुन्छ ? उहाँ अमेरिकामा सुसंस्कृत समाजमा बसेर आएको मान्छे यस्तो भिडतन्त्रमा विश्वास गर्न सुहाउँछ ? प्रश्न त्यहाँनेर हो ।
यो व्यक्तिगत लडाई होइन । रवी लामिछानेले मेरो खोरिया फाँडिदिएको होइन । मैले उहाँको केही विगारिदिएको पनि होइन । यसलाई सामान्यकरण गर्न हुँदैन । प्रेस काउन्सिल सरकारले मिडियालाई नियमन गर्न बनाएको आधिकारिक निकाय हो । त्यो संस्थाले विशुद्ध रुपमा आएका उजुरीमाथि छानबीन गरेको हो । केही दिन अघि अन्नपूर्ण पोस्टका सम्पादकलाई पनि बोलाइएको छ ।
कान्तिपुरका सम्पादकलाई पनि बोलाइएको छ । कानुन सबैलाई निरपेक्ष रुपमा समान हिसाबले लागु हन्छ । म कार्यरत जनआस्थालाई पनि यहाँबाट पुर्जि काटिएको छ । क्षमता ढकालको सन्दर्भमा मैले खण्डन छापेको छु । म चाहीँ कानुनभन्दा बाहिर हुन्छु र ?
तपाईंकै कारण श्रीषा कार्कीले आत्महत्या गर्न बाध्य भइन् भन्ने छ । यो प्रकरण फेरी चर्चामा आएको छ नी ?
तपाईंमाथि यो आरोप किन लागिरहन्छ ?
यो ५९ साल जेठको २३ गतेको कुरा हो । राजाले पहिलोपटक देउवा सरकारलाई बर्खास्त गरेर टेकओभर गरेको बोला हो । घटनाको श्रङ्खला छ । त्यसपछि कृष्ण सेनको हत्या भयो । जनआस्थाको भूमिका हेर्नु भयो भने दरबार र सेनासँग जुधेको छ । त्यतिबेलाको संस्थापनसँग जुधेको पत्रिका कोही थियो भने जनआस्था मात्रै हो ।
उसलाई बन्द गराउन संविधानले दिँदैन थियो । जनआस्था बन्द गराउने प्रपञ्च अन्तर्गत भएको एउटा घटना हो । फोटो छापेको हो किशोर श्रेष्ठले । त्यो समाचारमा श्रीषा कार्कीको फोटो छ तर पात्रहरुको नाममा लोकमान सिंह कार्की, खुम बहादुर खड्का, केशव स्थापित सहित ४५ जनाको नाम छ । त्यो फोटो छापिएको ६ दिनपछि उनले आत्महत्या गरिन् त्यसको प्रकरण अर्कै हो ।
रवी लामिछानेले भन्नु भयो,‘त्यस्तो मिल्दैन ।’ सर्वोच्च अदालतले भनिसकेपछि टुङ्गिन्छ । अब कसरी भन्न पाइन्छ । पत्रकारीताको जीवनमा अनेकौँ अरोह अवरोह आइरहन्छन् । त्यो दुखद घटना हो । तर, रवीजीले विषयन्तर गर्नु भयो । उहाँलाई सोधियो,‘आचार संहिताको विषयमा तपाईं विरुद्ध यस्तो उजुरी परेको छ के भन्नु हुन्छ ?’
यस्तो प्रश्नको जवाफ म चिन गएँकी गइनँ । विदेश घुमेकी घुमिनँ भन्ने हुन्छ र ? म त विश्वको ५० वटा मुलुकमा घुमेको छु नी । म विश्व प्रेस काउन्सिलको उपाध्यक्ष हुँ । साउथ एशियन प्रेस अलाइन्स गठनका निम्ती अग्रसरता लिइरहेको पात्र हुँ । यो संस्थाको जिम्मेवार मान्छे हुँ । मैले गएर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गएर नेपालको प्रतिनिधित्व गरेँ भने कसैको लागि आरिस लाग्दो विषय हुनसक्छ र ? त्यसमाथि त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा जाँदा कहिले आयोजकले खर्च बेहोर्छन् त कहिले नेपाल सरकारले बेहोरेको हुन्छ । मैले देशको प्रतिनिधित्व गरेको अवस्था हो ।
उहाँ अमेरिका गएर बस्यो भनेर हामीले पनि नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकन नागरिकता पाउँ प्रभू भनेका छौँ र ! त्यो विषय वेग्लै कुरा हो । उहाँले आफ्नो जवाफ दिने हो । विषयन्तर गर्ने होइन । उहाँले सतही, खुद्रे मसिने कुरा गरेर, भूराभूरीलाई उफार्ने काम गर्नु भयो । नेपाली युवाहरु जो नेपालमा रोजगारीको अवसर नपाएर खाडी मुलुकमा गएर पसिना बगाइराख्नु भएको छ । उहाँहरुको भावनाको रवीले शोषण गरिरहनु भएको छ । उत्तेजित बनाउने भड्काउने काम गर्नु भएको छ । त्यसले भोली ती नेपाली युवालाई कानुन लाएर डिपोट हुन पर्ने अवस्था आयो भने, यहीँ पक्राउ परेर ५ वर्ष जेल जाने अवस्था आयो भने रवी जिले जिम्मेवारी लिनु हुन्छ की हुन्न ?
प्रेस काउन्सिलले केही गर्छ । प्रेस काउन्सिल चुपो लागेर बस्दैन । यो अथोरिटि हो । नचाहिँदो कुरामा यसले हात हालेको छैन । प्रेस काउन्सिलले रवीलाई तीन वर्ष जेल हाल्न खोज्यो भनेर उहाँले हल्ला मच्चाउने, भड्काउने र सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न खोज्नु भएको छ । त्यो गलत कुरा हो । प्रेस काउन्सिल प्रहरी चौकी होइन । गत साल देशान्तर साप्ताहिकका सम्पादक कविर राणालाई निर्वाचन आचार संहिता तोडेको अभियोगमा तीन दिन भित्र बुझाउनु भन्ने थियो ।
यही प्रेस काउन्सिलले हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन, तिम्रो काम पनि होइन पत्रकारलाई थुन्ने, चित्त नबुझे खण्डन पठाउ । प्रेस काउन्सिलले जवाफ त्यसपछि दिन्छ भनेर जवाफ दिने संस्था यही नै हो । थुनिएका सुशिल पन्त लगायत पत्रकारलाई छुटाएर ल्याउने संस्था पनि यही हो । पत्रकारलाई समस्या पर्दा सहयोग गर्ने, विरामी पर्दा उपचार खर्च दिने, लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने, समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको पक्षमा सर्वोच्च अदालत र सरकार विरुद्ध लड्ने निकाय हो । यसले मिडियालाई थुन्ने निकाय होइन । यो अध्यागमन होइन । यो गृहमन्त्रालय होइन ।
यो त पत्रकारहरुलाई मर्यादित बनाएर आचार संहिता पालना गराउने संस्था हो । रवी लामिछानेलाई भोली कसैले अन्याय ग¥यो भने जोगाउने पहिलो निकाय प्रेस काउन्सिल नै हो र हुनेछ ।
हामीलाई उहाँले चैत्र २६ गते लेखेको पत्र वैशाख ६ गते दर्ता हुन आयो । लिखित जवाफमा उहाँले ‘अन्टेसन्टे’ जवाफ दिनु भयो । उल्टो व्यक्तिगत आक्रमणमा उत्रिनु भयो । किशोर श्रेष्ठ व्यक्ति होला । उसको व्यावसायीक संलग्नता अन्तै पनि होला । तर, अहिलेको मितिमा यो कुर्सीमा बसेर भन्दा म प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष पनि हो । त्यसकारण उसले गरेको कर्म व्यक्तिगत हुनसक्दैन । त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने काम भयो । जुन १३ तारिखमा फेसबुकमा ‘म अब कुर्न सक्दिनँ । मेरो धैर्यताको बाँध टुट्यो । तिमी ब्ल्याकमेलरहरु, तिमी अपराधीहरु र ज्यानमाराहरु’ भन्ने आसयमा लेख्नु भयो । त्यसपछि प्रेस काउन्सिलले ल ठिकै छ उहाँ पत्रकार पनि होइन भन्नु हुन्छ ।
म विदेशी पनि होइन भनेपछि विदेशी हो की होइन त बुझ्नु पर्यो नी । हामीले अध्यागमनको रेकर्डबाट एक वर्ष अघि नै पाइसकेका थियौँ । गत साल डिसेम्बर आसपासमा फेसबुक मार्फत हामीलाई च्यालेन्ज गर्नु भयो । मैले फेसबुकमा लेखेको छु,‘तिमी विदेशी नागरिक नेपालीलाई गाली गरेर खोक्दै छौ । यस्तो नगर हिसाब किताव आउँदैछ । केही घण्टामा आउँछ ।’
निर्मलालाई न्याय दिलाउन ‘बलात्कारी दानवताको सर्वनाश गर्ने’ पुष्टिका भण्डारी उद्घोष (भिडियो)
ranjan September 1, 2018
चिकित्सा क्षेत्र सम्बन्धि योगेश भट्टराईको ज्ञान के छ? डाक्टर बिरुद्द किन चम्केका येति धेरै?
ranjan January 24, 2019
२२ अर्ब ६३ करोड घोटाला काण्डमा परेको आशंका गरिएका यी नेतालाई सरकारले केहि गरेन, सरकार मौन
ranjan November 25, 2018
मोरङमा गगन आएपछि गाँउनै कांग्रेसम प्रवेश,कम्युनिष्ट सरकार प्रति जनता दिक्कदार (भिडियो सहित)
ranjan December 13, 2018
गाउँका जनताको मन जित्दै छन् कांग्रेसका यी युवा नेता, कम्युनिस्टहरू भने बेपत्ता
चुला चुलामा ग्यासको पाइप पुग्यो त ? दुई बर्स अगाडिको भासण सुन्दा कस्तो भा थियो?
ranjan July 6, 2018